Inter_Agency_INARAS REFERRAL FORM Final_28_1_2016
Inter_Agency_INARA’S COVERAGE CRITERIA _28_1_2016
Inter_Agency_Department of breast disease_28_1_2016
Inter_Agency_BHNWG_MOM_26 February 2016
Inter_Agency HAUS report 2015
news Burma News International, 22 Jul 2016 (5 years ago )
Ramannyarattha Buddhism University,anew university in Mon State, started offering its Diploma in Buddhism. The program started on July 24, at the university in Myaingtharyar Quarter, Mawlamyine capital of Mon State, formerly known as Moulmein. Priority is given to monks and nuns, with layper...
မွန်ပြည်နယ်တွင်တက္ကသိုလ်အသစ်ဖြစ်သည့်ရာမညရဌဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် Diploma in Buddhismဘွဲ့ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့၊မြိုင်သာယာရပ်ကွက်တွင် ရာမညရဌဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်၏Diploma in Buddhismတန်းကိုဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်နေ့တွင်စတင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ သံဃာတော်များနှင့်သီလရှင်များကိုဦးစားပေး...